Dowladda MASAR oo ku fashilantay qorshe ay ka damacsaneyd Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Dowladda MASAR oo ku fashilantay qorshe ay ka damacsaneyd Soomaaliya
Dowladda MASAR oo ku fashilantay qorshe ay ka damacsaneyd Soomaaliya
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Masar ayaa ku guul-darreysatay isku day ay ku dooneysay inay saameyn siyaasadeed ku yeelato Soomaaliya, waxaa sidaas qortay wakaaladda wararka Turkey ee Anadolu.
“Sanadkii tegay, Masar waxay marar badan isku dayday inay saaxiib la noqoto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ayada oo u ballan-qaadeysa taageero militari,” ayuu yiri diblomaasi sare oo ay soo xigatay Anadolu.
“Mas’uuliyiinta Soomaalida waxay garowsadeen qorshooyinka xun ee Masar ay damacsan tahay, wayna diideen kaalmada militari ee loo yaboohay,” ayuu yiri.
Sida uu sheegay diblomaasiga, kadib markii dowladda Soomaaliya ay diiday yabooha, Masar ayaa u weecatay maamulka Somaliland, oo sheegta inuu ka madax-banaan yahay Soomaaliya, islamarkaana xiisad ay kala dhaxeyso dowladda federaalka.
Qaahira ayaa bishii July waxay mas’uuliyiinta Hargeysa weydsiiteen inay u ogolaadaan inay sladhig militari halkaas ka sameysato.